Imbali nenkcubeko yaseSpeyin ibonakala kakuhle eToledo. Ngo-1986 iToledo yamiselwa ukuba ibe yiNdawo Ebalulekileyo Nenembali Ehlabathini, ibe ithandwa kakhulu ngabakhenkethi
ISPEYIN lilizwe elinabantu abahlukahlukeneyo ibe indlela ome ngayo umhlaba yahlukile. Iindawo ezininzi zinamasimi engqolowa, awezidiliya kunye nemithi yeminquma. Xa ukumazantsi eSpeyin ubunokuhamba nje iikhilomitha eziyi-14 ngolwandle uze ufike eAfrika.
Abantu abaninzi, abafana namaFenike, amaGrike nabantu baseCarthage, bayokuhlala kule ndawo isemzantsi-ntshona weYurophu. Ngenkulungwane yesithathu Ngaphambi Kwexesha Eliqhelekileyo, kwafika amaRoma, ohlutha umhlaba awawubiza ngokuba yiHispania. Kulo mhlaba kwahlala amaVisigoth namaMoor.
Kunyaka wakutshanje, bangaphezu kwezigidi eziyi-68 abantu abaye baya kubona iSpeyin. Bathanda ilanga lakhona, ulwandle oluthi ndijonge, ubuchule babantu balapho. Abanye banomdla kwimbali nakwizakhiwo ezintle zeli lizwe. Enye into etsala iindwendwe kukutya kwalapha. Eyona nto ithandwa kakhulu kukutya kwaselwandle, iham erhawulwe emlilweni, isityu esinamafutha amaninzi, iisaladi kunye nemifuno ephekwe ngeoli yeminquma okanye egalelwe yona. Iqanda laseSpeyin, nokunye ukutya kwakhona okubizwa ngokuba yipaella netapas kwaziwa ehlabathini lonke.
IMariscada kukutya kwaselwandle okuthandwayo
Benza umdaniso ekuthiwa yiflamenco
Abantu baseSpeyin banobubele yaye bangamancoko. Nakubeni bebaninzi abathi bangamaRoma Katolika, bambalwa abayayo kuMthendeleko. Kwiminyaka yakutshanje, abantu baseAfrika, eAsia, nabaseLatin America baye bayokuhlala eSpeyin. Abaninzi babo bayakuthanda ukuncokola ngeenkolelo nangezithethe zabo. AmaNgqina KaYehova aye ancokola nabo aza abanceda bafunda izinto ezithethwa yiBhayibhile.
Ngo-2015, amaNgqina angaphezu kwe-10 500 aye akha aza alungisa iindawo zokunqula ekuthiwa ziiHolo ZoBukumkani ezingaphezu kwe-70 engajonganga kubhatalwa. Oomasipala baye bawanika umhlaba wokwakha ezinye zezi holo. Ngaphandle kweSpanish, amaNgqina KaYehova aye aqhuba iintlanganiso zawo ngeelwimi ezingaphezu kwe-30 ukuze ancede abantu abasuka kwamanye amazwe. Ngo-2016, bangaphezu kwe-186 000 abantu abaye bakhona kwintlanganiso ekhethekileyo yamaNgqina KaYehova yokukhumbula ukufa kukaYesu Kristu.
Eyona oli yeminquma ininzi kakhulu ehlabathini ivela eSpeyin.
INtaba iTeide iphakame ngeemitha eziyi-3 718, ikwisiQithi SaseCanary, ibe iyeyona ntaba iphakamileyo eSpeyin. Xa ilinganiswa ukusuka apho iqala khona ngaphantsi kwamanzi ukunyuka, iyintaba-mlilo yesithathu ukuphakama ehlabathini lonke.
EZONA LWIMI ZITHETHWAYO: ISPANISH, ISIBASQUE, ISICATALAN, ISIGALICIA KUNYE NESIVALENCIA
ABEMI: 46 439 000
IMOZULU: EHLOTYENI LIGQATS’ UBHOBHOYI KANTI EBUSIKA LIQHAQHAZELISA AMAZINYO